Etu esi wụnye Njikọ nke Akụkọ Ifo na Ubuntu / Debian (Usoro 2018) (Akpaaka) | Site na Linux
Oge ụfọdụ gara aga anyị bipụtara nnukwu nduzi etu esi eme wụnye Njikọ nke Akụkọ Akụkọ na Linux site na iji Wine, Winetricks na PlayOnLinuxRuo taa, usoro ahụ na-arụ ọrụ maka m n'enweghị nsogbu ọ bụla, mana ọtụtụ ndị ọrụ edeela iji gwa anyị na n'ọnọdụ ha usoro ahụ anaghị arụ ọrụ dịka o kwesiri, yabụ n'oge a anyị na-eweta usoro ziri ezi na akpaka ka enwere m ikeWụnye Njikọ Akụkọ Ochie na Ubuntu / Debian.
Usoro a na-elekwasị anya n'iji mmanya ahazi ahazi nke na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbakwunye na ntinye nke nchịkọta ndị dị mkpa ka ị ghara inwe ụdị nsogbu ọ bụla.
Etu esi wụnye League of Legends na Ubuntu / Debian?
Nzọụkwụ maka wụnye League of Legends na Ubuntu / Debian Na usoro a ha dị mfe, na - ebudata faịlụ ahụ nke nwere egwuregwu ahụ na ihe atụ nke mmanya a kwadebere Ebe a, faịlụ a nwere ihe dị ka 9.3 GB nke ohere diski, ozugbo ebudatara anyị na-aga n'ihu ịwụnye ya site na ịme nhazi kwesịrị ekwesị .sh maka distro gị.
Ndị ọrụ Ubuntu nwere ike ibudata ihe nrụnye site na Ebe a na ndi nke Debian site na nke ozo njikọN'okwu abụọ a, ọ dị mfe inye ikikere igbu ma mezuo .sh, nke ị ga-ebu ụzọ tinye paswọọdụ mgbọrọgwụ gị iji tinye nchekwa dị mkpa wee nabata nchịkọta ndị dị mkpa, na mgbakwunye na ịmepụta ndekọ GAMES ebe ị ga-eme. gbaa LOL.
Ozugbo edemede mechara emezu ihe niile ọ na-eme, ọ ga-emepụta na-akpaghị aka na LOL site na desktọpụ anyị, yabụ anyị nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ egwuregwu a.
Vidio izizi ebe anyị mụtara iji wụnye LOL na usoro a kachasị n'okpuru:
Iji mechaa ihe na-adọrọ mmasị, ndị nwere nsogbu igosipụta leta mgbe ha banyere egwuregwu ahụ nwere ike idozi ya site na ịmanye lol iji directx, iji mee nke a gbanwee faịlụ nhazi nke enwere ike ịchọta na GAMES/LOL/LoL32/drive_c/Riot Games/League of Legends/Config/game.cfg imezi ahịrị x3d_platform=1 site x3d_platform=0, anyị na-azọpụta ma nwee obi ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi etinye Njikọ nke Akụkọ Ifo na Ubuntu / Debian (Usoro 2018) (Akpaaka)
Ikwesiri ibugo ya dika iyi 🙂
Ọ bụ eziokwu! Daalụ maka ibugo ya na maka nkuzi ahụ, mana enweghị m ike ibudata ya ma ugbu a ọ na - ekwu na ọnụ ọgụgụ kachasị nke nbudata na Dropbox karịrị ...
Enweghi ike ibudata site na Dropbox n'ihi oke nbudata ...
Ọ bụ na ha ga-ebugo faịlụ ndị ahụ na Crapbox? : S.
Biko nwere ike ibugote ya na ikpo okwu ọzọ ..
enweghị ike ibudata faịlụ ahụ
Aga m anwa imelite ya site na bulite ya na saịtị ọzọ ...
Hapu uzo ohuru bikoeeee !!!!
ezigbo onyinye! Ọ ga-adị mma imelite faịlụ ahụ
Zaghachi Nicolas Gonzalez
Ntinye ebe ị nwetara ya? na paireti n'ọnụ mmiri ma ọ bụrụ na ị na-achọ flatpak e nwere ndị akpaka installers nke egwuregwu na mmanya.
M nwere arụnyere na ma eziokwu bụ, anyị itu fps na m nwere GTX 1060
enweghị ike ibudata faịlụ ahụ ka ọ ghara ịba uru